Dowladda federaalka Soomaaliya oo la wareegtay ciidankii ay tababareen Imaaraatka Carabta - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda federaalka Soomaaliya oo la wareegtay ciidankii ay tababareen Imaaraatka Carabta
April 21, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Xerada ciidanka uu Imaaraatku tababari jiray. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegtay ciidankii ay tababareen Imaaraatka Carabta, sida uu sheegay sargaal ciidanka katirsan.
Abaanduulaha ciidanka Soomaaliya Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay la wareegtay ciidankii ay gacanta ku hayeen Imaaraatka Carabta.
Caanood ayaa intaas ku daray in hadda kadib ay dowladda federaalka Soomaaliya ay bixin doonto mushahaarka iyo tababarka ciidankaas.
Asbuucii lasoo dhaafay, Imaaraatka Carabta ayaa joojiyay taageeradii ay siin jireen ku dhawaad 2,000 oo katirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo ay gacanta ku hayeen tan iyo sanadkii 2014-kii.
Xiriirka u dhaxeeya labada dal ayaa meel xun gaaray maalmihii lasoo dhaafay kadib markii ciidamada ammaanka ee ku sugan Muqdisho ay 8-dii bishaan April qabteen lacag kaash ah oo ay siday diyaarad ka timid Imaaraatka.
Imaaraatka Carabta ayaa sheegay in lacagta oo dhan $9.6 milyan loogu talogalay in lagu daboolo mushahaarka 2,407 askari oo katirsan ciidamada Soomaaliya oo ay tababaraan Imaaraatka.
Xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraatka ayaa xumaa tan iyo maamulka Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
April 17, 2018 Dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in wadahadal la furtay Imaaraatka Carabta
December 10, 2017 Qaramada Midoobay oo sheegtay in 2,000 shacab ah lagu dilay gudaha Soomaaliya muddo labo sano gudahood ah
August 5, 2018 Duqa kumeelgaarka ah ee magaalada Garoowe oo aan u tartameyn doorashada soo socota ee dowladda hoose
Olgan Bekar: Turkigu wuxuu door-bidaa in uusan farogelin siyaasadda gudaha Soomaaliya
Ugu yaraan 12 qof oo ku dhimatay qaraxyo ka dhacay Gaalkacyo
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii labo gaari oo ay wadaan naftood haligeyaal lagu qarxiyay xarunta dowlada hoose ee magaalada Gaalkacyo, [...]
Milatariga Mareykanka oo sheegay in shan maleeshiyo oo Al-Shabaab ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday gobolka Galgaduud
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in shan maleeshiyo oo Al-Shabaab ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday Soomaaliya, sida ay bayaan maanta oo Axad ah ku sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika. Duqeynta ka dhanka [...]